Kitaaba Dubbisuu Amaleeffachuun Nama Qaroomsa
Biyyitii guddattee ijoollee isaanii diqqeennaanuu mala kanatti guddifatan.Hayyee bara kana kitaaba hagam dubbiftan hagam dubbisuuf karoora qabdan?Amalii nama keennaa ka wa dubbisuu qabaachuu maan fakkaata?Tana irratti profeeseoorata Oromoo Univeristy biyya alaatii fi biyya keessaa barsiisan wa gaafanne.
Amalii maatii Amerikaa tokko ijoollee isaanii diqqeennaanuu wa dubbisuu barsiisuu,yoo isaan rafan siree keessatti kitaaba isaan jaalatan dubbisaniif.Mana barmusaatti ammoo /reading class/ ykn kutaa wa itti dubbisanitti jira.Tun cuftii amala kana guddiftiif.
Akka namii hedduun jedhutti durii nama seenaa nuu barreesse dhabnee jedhan amma ammoo amala wa dubbisuu qabaachuu dhabuun waan itti callisanii miti.
Tana irratti Dr.Mohammad Hassan Univeriosty Atlaantaa Georgiatti professera seenaa, Dr.Ilfinaa Uddeessaa Bariisoo Univeristy Londonii UKtti barsiisa Afaanii,Obbo Befqaaduu Dhaabaa,/University-College/ /New Generationitti /barsiisaa siyaasaa fi itti gaafatamaa damee alaa fi Obbo Dirribaa Margaa itti gaafatamaa Waldaa Barressitoota Oromoo amala wa dubbisuu qabaachuu irratti dubbfine kutaa sadeenuu MP3 gara harka mirgaa jiru irraa caqasaa.
Gaaffii fi Deebii Kutaa1ffaa
Gaaffii fi Deebii Kutaa3ffaa